Orinasa sy atrikasa
Rafitra fitsaboana VOC
Fitaovana fikirakirana ny rivotra
Fitaovana fitantanana rivotra madio
Fitaovana fikirakirana ny rivotra DX
Fitaovana fikirakirana rivotra madio
Fitaovana fikirakirana ny rivotra indostrialy
Toeram-panafihana any an-tafontrano
Conditioning amin'ny rivotra ICT
Efitra madio HVAC System
Fanadiovana ny rivotra
Mpivarotra hafanana amin'ny rivotra
Ventilator fanarenana hafanana
Fandinihana tranga momba ny tetikasa
Zavamaniry fanafody Vahaolana HVAC
Ny zavamaniry fivarotam-panafody dia miankina amin'ny fahombiazan'ny efitrano madio hahazoana antoka fa hahatratra ny fenitra ilaina amin'ny vokatra. Ny rafitra HVAC amin'ny famokarana ampahany amin'ny tobim-panafody dia manara-maso akaiky ny masoivohon'ny governemanta. Ny tsy fanarahana ny fepetra takiana amin'ny kalitao dia mety hampidi-doza ny tompony amin'ny raharaham-pitsarana na amin'ny raharaham-barotra. Noho izany dia zava-dehibe ny fananganana tobim-panafody amin'ny rafitra fanaraha-maso henjana sy voafaritra tsara. Airwoods mamolavola, manangana sy mitazona ny rafitra HVAC matanjaka sy ny efitrano fidiovana izay mifanaraka amin'ny fangatahana henjana mifandraika amin'ny toeram-pitsaboana.
Fepetra takiana amin'ny HVAC ho an'ny fanafody
Ny fepetra takiana amin'ny kalitaon'ny rivotra ao anaty any amin'ny fitondra-panafody, ao anatin'izany ny fifehezana ny hamandoana sy ny sivana dia anisan'ny henjana indrindra amin'ny fampiharana trano. Ny iray amin'ireo dingana manakiana indrindra dia ny rivotra madio. Satria ny tanjona voalohany dia ny mifehy ny loto amin'ny sehatry ny famokarana sy ny fikarohana, ny vovoka sy ny mikraoba no atahorana hatrany ao anatin'ireny fotodrafitrasa ireny, mitaky rafitra fanivanana sy fantsona voarafitra tsara izay manaraka ny fenitry ny kalitaon'ny rivotra anaty (IAQ) henjana ary manampy hampihena ny fihanaky ny aretina azo avy amin'ny rivotra sy ny loto.
Fanampin'izany, satria ny tobim-panafody dia mitaky fifehezana ny toetr'andro tsy tapaka sy mahomby, manakiana ny rafitra maharitra ny rafitra HVAC hiasa tsy tapaka, nefa mahomby mba hitazomana ny vidin'ny angovo faran'izay ambany araka izay tratra. Ary farany, satria ny faritra samihafa amin'ny fotodrafitrasa dia samy hanana ny rivotra sy ny hafanana ilaina manokana, ny rafitra HVAC dia tsy maintsy noforonina mba hifanaraka amin'ireo fepetra takiana amin'ny fifehezana ny toetrandro ao anatin'ny faritra samihafa amin'ilay fotodrafitrasa.
Orinasa fivarotam-panafody matanjaka
Akanjo sy fanafody fametahana fanafody fanafody Patch
Mpanamboatra fitaovana fitsaboana
Ny vahaolana HVAC, ny rafitra valindrihana mifangaro, ary ny efitrano Customize Clean dia manampy amin'ny fanatanterahana ireo fepetra takiana amin'ny indostrian'ny famokarana fanafody, izay mitaky fifehezana henjana sy fangaro maloto.
Izahay dia manao tombana feno ny filan'ny mpanjifanay ary manome endrika feno momba ny fizotry ny famokarana, ny fitaovana, ny fanamasinana ny rivotra, ny famatsian-drano sy ny rano, ny famaritana sy ny fitsipika napetraky ny governemanta.
Ho an'ny famokarana fanafody, famokarana sy fahombiazana no lakilen'ny fahombiazana. Ny firafitra famolavolana dia tokony ho ara-dalàna sy mifono arakaraka ny fepetra takian'ny fizotry ny famokarana, izay manampy amin'ny asa famokarana ary manome antoka ny fitantanana mahomby ny fizotry ny famokarana.
Ho an'ny rafitra fanadiovana ny rivotra dia misy hevitra roa lehibe. Ny iray dia ny fifehezana tsindry tsara mba hisorohana ny fiantraikan'ny rivotra ivelany amin'ny tontolo iainana; Ary ny fifehezana tsindry ratsy mba hisorohana ny fanaparitahana ny loto amin'ny poti amin'ny fizotry ny famokarana. Na mila fanerena rivotra tsara ianao na fanadiovana rivotra tsindry ratsy, mpanamboatra sy mpaninjara fanadiovana efa za-draharaha, toy ny Airwoods, dia afaka miantoka ny famolavolana, ny fampandrosoana ary ny fanomezana vahaolana mifanaraka amin'ny ilainao. Ao amin'ny Airwoods, ny manam-pahaizana momba anay dia manana fahalalana miasa feno momba ny famolavolana ny fanadiovana sy ny fananganana trano fidiovana manontolo, manomboka amin'ny fitaovana fanadiovana sy fomba fanao tsara indrindra hatrany amin'ny fitaovana HVAC ilaina amin'ny karazana fampiharana samihafa.
Fanovozan-kevitra momba ny tetikasa
Toerana fanadiovana PCR fanadiovana aretina
Fanadiovana fanadiovana sarontava azo ampiasaina
Tetikasa fanadiovana fanafody any Kambodza
Efitrano fanadiovana indostrialy Bangladesh
Tetikasa fanadiovana ara-panafody Boliviana
Hatramin'ny 2007, Airwoods natokana hanome vahaolana feno hvac, efitrano madio ary vahaolana VOC amin'ny indostria samihafa. Izahay dia mikendry ny hanolotra kalitaon'ny rivotra fananganana tsara ho an'izao tontolo izao miaraka amin'ny vokatra mahomby angovo, vahaolana namboarina, vidiny lafo ary tolotra lehibe.
Momba ny Airwoods
Room 2101, foibe foibe foibe No.25, Park Ecological Tian Tian Hi-Tech, No. 555 Panyu Ave, Distrikan'i Panyu, Guangzhou, Sina